Waziirka Difaaca Mareykanka Oo Isku Day Dil Ka Badbaaday. – Bogga Calamada.com
Waziirka Difaaca Mareykanka gaalka lagu magacaabo James Matisse ayaa isku day dil ka badbaaday xilli uu Safar aan horay loo sii shaacin ku tagay dalka Afghanistan.
James Matisse ayaa markii uu tagay saldhiga ugu weyn ee ciidamada Saliibiyiinta Mareykanka ay ka sameysteen dalka Afghansitan kaasi oo ku dhex yaala garoonka diyaadaha Bagram ee gobalka Barwaan ee Waqooyga Afghanistan waxa uu la kulmay weerar culus oo kaga yimid dhanka ciidamada Mujaahidiinta Imaarada Islaamiga Afghanistan.
Guutada Madaafiicda Imaarada Islaamiga Afghanistan ayaa tiro madaafiic ah ku garaacay saldhiga waxeyna Madaafiicda ku dhaceen gudaha saldhiga taasi oo sababtay khasaara nafeet iyo mid hantiyadeed oo soo gaartay ciidamada Saliibiyiinta Mareykanka.
Waziirka Difaaca Mareykanka James Matisse ayey cabsi xoogan soo wajahday maadaama gudaha saldhiga ay kusoo dhaceen tiro madaafiic ah xilli uu kulan la lahaa saraakiisha ciidamada Saliibiyiinta Mareykanka ee ku sugan saldhigaasi.
Isku day-ga dilka ah ee uu ka badbaaday waziirka difaaca Mareykanka ayaa kusoo aadaysa xilli dhiig bax xoogan uu ku socday ciidamada Mareykanka ee duulaanka ku joogta dalka Afghanistan.